20 Sannadood Kaddib, Miyuu Solskjaer Mar Kale Noqon Doonaa Halyeyga Camp Nou Kaga Farxiya Manchester United? – Cadalool.com
Labaatan sannadood ayaa laga joogaa guushii ugu weynayd ee Manchester United ay ku gaadhay garoonka Barcelona ee Camp Nou, hase yeeshee mar kale ayay fursad u haysataa inay sidii oo kale ugu dhex-damaashaaddo.
26 May 1999 ayay Manchester United tagtay garoonka Barcelona ee Camp Nou, waxaana xiddigihii hoggaaminayey ka mid ahaa tababaraha hadda ee Ole Gunnar Solskjaer oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ka qosliyey jamaahiirta Manchester United.
Waqtigaas, waxay United gudaha Camp Nou foodda isku-dareen Bayern Munich oo ay iskugu soo baxeen finalkii Champions League, waxaana daqiiqaddii 90-aad ay ciyaartu ahayd 1-0 ay Bayern Munich isa-siisay guusha Koobka, laakiin United wax walba ka filo.
Goolhayihii Manchester United ee waqtigaas, Peter Schmeichel ayaa tegay goolka Bayern Munich si uu uga qayb-qaato weerarkii ugu dambeeyey ee kooxdiisa iyo inay mucjiso samayn karaan, haddiiba uu isagu helo fursadna uu goolka ka dhaliyo.
Mucjisadaasi way dhacday, waxaana gool barbar-dhac ah u dhaliyey halyeygii Teddy Sheringham oo ciyaarta ka dhigay barbar-dhac 1-1.
Jamaahiirta labada kooxood ayaa markaas fishay in ciyaarta lagu dari doono 30 daqiiqadood oo dheeraad ah oo ay ku kala baxeen, laakiin Manchester United ayaa mar kale qorshaha beddeshay.
Garsooraha oo siidhiga dhamaadka afka ku haya, ayaa kubbad uu David Beckham soo qaaday waxa madaxa ku dhuftay Sheringham, waxaana si farxad leh goolka ugu leexiiyey Ole Gunnar Solskjaer oo noqday halyeyga illaa hadda ku calaamadsan mucjisada Manchester United ay ka dhigtay Camp Nou.
Bayern Munich ayaa u qaadan weyday waxa ku dhacay, waxaana illaa hadda ciyaartaas lagu tilmaamaa midda ugu xasuusta badan dhamaan finaladii tartamada Yurub ee dhacay.
20 sannadood ayaa waqtigaas kasoo wareegay, waxaanay Manchester United isku diyaarinaysaa inay u safarto garoonka Camp Nou, iyadoo uu waliba halyeygii maalintaasi xidhan yahay funaanadda kooxda Manchester oo uu tababare ka yahay.
Laakiin doorkan, waxay wada ciyaari doonaan Barcelona oo ay isku beegmeen wareegga siddeed dhamaadka ee CChampions League, waxaana marka uu Solskjaer tago garoonkaas ay xasuustiisu dib u noqon doontaa 20 sannadood isagoo fiirin doona halkii uu taagnaa markii uu goolka dhaliyey iyo meelihii uu ku damaashaadayey oo ay suurtogal tahay inuu xasuus ahaan u dul-istaago. Balse su’aasha lays-weydiinayo ayaa ah, miyuu mar kale Ole Gunnar Solskjaer noqon doonaa halyeyga Manchester United kaga farxiya garoonka Barcelona ee Camp Nou?
Jawaabtu guux badan ayay kicinaysaa, waxaana ay u badan tahay ‘MAYA’ laakiin kubadda cagta wax walba waa suurtogal.
Marka la eego awoodda labada kooxood, Manchester United aad ayey uga hoosaysaa Barceona, waana sababta aanay jamaahiirtu wax badan uga filan karin marka ay u safraan Camp Nou, hase yeeshee kulanka hore ee garoonka Old Trafford haddii ay si fiican ugu shaqaystaan, waxay ku farxi karaan gudaha Camp Nou.
Si kale marka loo eego, Manchester United waxay garoonkeeda kula kulantay niyad-jab bishii hore markii ay PSG ugu dhiibtay 2-0, balse lugtii labaad ayay Parc des Prince kusoo dhigtay guul taariikhi ah oo ay ku xaqiijisatay inay timid wareeggan, taas darteed ayaa ah mid aan lagu dhayalsan karin United.
Si kastaba ha ahaatee, su’aasha cinwaanka sare ku xusan way taagnaan doontaa illaa maalinta ay kala baxayaan labada naadi.